Uyilo loCoceko, iNkonzo yeCoceko, iiMveliso zoCoceko- ii-Airwoods
Sijolise kwi-HVAC eNtsha kunye neZisombululo zeGumbi lokucoca
I-AIRWOODS ngumboneleli okhokelayo wehlabathi wobushushu bokufudumeza amandla, umoya wokungenisa umoya kunye nemeko yomoya (HVAC) kunye nezisombululo ezigqibeleleyo zeHVAC kwiimarike zorhwebo nezorhwebo. Ukuzinikela kwethu kukubonelela abathengi bethu ngeenkonzo ezisemgangathweni ophezulu kunye neemveliso ngamaxabiso afikelelekayo.
Iprojekthi yoNyaka egqibeleleyo
Inkqubo yokubonisana kunye nokumiliselwa
Ukubonelela ngeenkonzo zonxibelelwano kunye neengcebiso, ukhetho lweemveliso kunye nemizobo yoyilo ngokweeprojekthi.
Ukufakwa ngaphesheya kunye nokuGunyaziswa
Iqela lofakelo lweAirwoods linendawo ebanzi yokwakha kwindawo, ufakelo kunye namava okuyalela.
Isisombululo seNkqubo kunye neziXhobo
Ukubonelela ngezisombululo ezizizo kuyilo, ukuthengwa kwempahla, ukuthuthwa, ukufakwa, uqeqesho kunye neenkonzo zokugunyazisa.
Uqeqesho lokusebenza nasemva kweNkonzo yokuThengisa
Ukubonelela ngoqeqesho lobungcali ukunceda abathengi ukuba baphathe ngcono inkqubo yabo, ukunciphisa isiphoso kunye nokwandisa ixesha lenkonzo yomatshini.
Ukuzinikela kwethu kukubonelela abathengi bethu ngeenkonzo ezisemgangathweni ophezulu kunye neemveliso ngamaxabiso afikelelekayo.
Ukusuka kulawulo lofikelelo kuthintelo lwe-intruder, ukusuka ekubekweni kweliso kwi-cybersecurity.
Ifama yale mihla yezoLimo ngaphakathi
Ngobuchwephesha bobuchwephesha bomoya obuchanekileyo, ukusebenza ngokukuko kwezolimo zangaphakathi zestereo ziyathandwa ngenxa yemveliso ephezulu kunye nokuzinzileyo kuwo wonke unyaka, kunye nenzuzo enenzuzo kwezoqoqosho.
Igumbi lokucoca okanye igumbi elicocekileyo liziko elisetyenziswa njengenxalenye yemveliso ekhethekileyo yoshishino okanye uphando lwezenzululwazi, kubandakanya ukwenziwa kwezinto ezixuba amayeza kunye nee-microprocessors.
Ukuprinta inkqubo yokuvelisa izinto ezi-voltatile organic compounds (VOCs) zivela kwinki ...
Inkqubo ye-HVAC yenye yezona ndawo zibalulekileyo zokufakwa kwindawo yokutyela / ehotele i ...
Izinto eziguqukayo eziphilayo
Unyango lwe-Airwoods VOC, ulawulo kunye nokubuyisa isisombululo, ungcoliseko lomoya oluphantsi ...
Xa isiza kwimfundo, uninzi lwamaxesha sibhekisa esikolweni apho bobabini abafundi ...
Jonga iziko levidiyo ngokubonisa iiprojekthi kunye nezixhobo zemfundo.
Iimodyuli eziPholileyo zomoya eziPholileyo zeScroll Chiller
CVE Series esisigxina Magnet yolunye inverte ...
Iipaneli zeGlasi zeSandwich zoMlomo
ICandelo lokuPhathwa komoya eliMisiweyo
Uhlobo nkqo Ubushushu Pump Amandla yoBuyiselo yoBushushu Ve ...
Amanzi aPholileyo ngaMandla okuPhathwa koMoya
INKQUBO YONYANGO LWE-VOCs
Ngomhla wama-22 ku-2020
Umahluko phakathi kweGumbi loCoceko noCinezelo oluCokisekileyo
Ukusukela ngo-2007, iAirwoods ezinikele ukubonelela ngezisombululo ezibanzi zehvac kwimizi mveliso eyahlukeneyo. Sinikezela ngesisombululo segumbi elicocekileyo. Kunye abayili endlwini, iinjineli ngokusisigxina kunye nabaphathi projekthi abazinikeleyo, exper yethu ...
Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-2020
Izinto ezisisiseko zeFFU kunye noyilo lweNkqubo
Yintoni iCandelo lokucoca abalandeli? Icandelo lokucoca ulwelo okanye i-FFU kubalulekile ukuba i-laminar flow diffuser ene-fan edibeneyo kunye nemoto. Umtshini kunye nemoto zilapho ukoyisa uxinzelelo lwe-static ye-HEPA yangaphakathi okanye isihluzo se-ULPA. Oku kuluncedo ...
NgoNovemba 15, 2020
Ishishini lokutya lixhamla njani kumagumbi acocekileyo?
Impilo kunye nokuhlala kakuhle kwezigidi kuxhomekeke kubenzi kunye nakubapakethi 'kumandla okugcina imeko ekhuselekileyo nengenabungozi ngexesha lokuvelisa. Kungenxa yoko le nto iingcali kweli candelo zibanjelwe imigangatho engqwabalala kune ...
I-Airwoods HVAC: Imiboniso yeeprojekthi zaseMongolia
I-Airwoods ifezekise ngempumelelo ngaphezulu kweeprojekthi ezingama-30 eMongolia. Ukubandakanya iVenkile yeSebe leNomin State, iTuguldur Shopping Centre, iHobby International School, iSky Garden Residence kunye nokunye. Sizinikele kuphando kunye nobugcisa ...
Ukulayisha izikhongozeli zeProjekthi ye-PCR ye-Bangladesh
Ukupakisha kunye nokulayisha isitya kakuhle sisitshixo sokufumana ukuthunyelwa kubume obuhle xa abathengi bethu befumana kwelinye icala. Kule projekthi yaseBangladesh yococeko, umphathi weprojekthi uJonny Shi wayehlala esizeni ukuze abeke iliso kwaye ancedise yonke inkqubo yokulayisha. Yena ...